Itekhnoloji yeWelding - Qiangzhong Machinery Technology Co., Ltd.
Umbutho weWelding Society waseMelika i-AWS ifuna izilinganisi ezifanayo zeewelding kunye neewelds ezizenzekelayo zenkqubo yokuchwetheza engenasici engenanto. Kungenxa yokuba zininzi iziphene ezingenakuthintelwa kwi-welding yesandla. Umzekelo, ukuhanjiswa okungalinganiyo kwentsimbi ye-weld, ukujikeleza kodonga kunye nobukhulu bodonga ngokucacileyo azonelanga, ezichaphazela ukusebenza ngokukuko kwe-CIP / SIP kwi-Intanethi, kwaye okunzulu ngakumbi ngumxholo wombhobho. Kulula ukubangela into engekho mgangathweni.
I-welding ezenzekelayo yomkhondo inokuziphepha zonke iintlobo zeziganeko ezingathandekiyo ezibangelwa kukuwelda kwesiko kwemveli. Olu ayilulo nje utshintsho lobuchwephesha, kuba umgangatho wamacandelo e-welding udlala indima ebalulekileyo ekufezekiseni iimfuno zentsimbi ezenzekelayo.
Qiangzhong unokubonelela iindawo iwelding ukuba ukuhlangabezana neemfuno welding kaloliwe oluzenzekelayo kubasebenzisi kulo lonke ihlabathi. Ngenxa yokuzingisa okungapheliyo kwenkqubo yokhuseleko lwemibhobho yensimbi engenasiphelo, sinoxanduva noxanduva lokuthwala lo mthwalo kunye nokubonelela abathengi ngeendawo ezifanelekileyo zokuwelda ezihlangabezana nokudibanisa ngokuzenzekelayo iileyili ukunceda abathengi ukuphucula ixabiso labo.